ARPG dhan ayaa dhowaan u imaan doona mobilkaaga: Blizzard's Immortal Diablo | Androidsis
Shalay Blizzard wuxuu ku dhawaaqay Diablo Immortal, oo ah sharafteeda weyn ee ciyaarta qalabka mobilada iyo in aan sugeynay in mudo ah hada. Gaar ahaan maxaa yeelay kuwa kale ee waaweyn, sida Bethesda o Nintendo, Waxay horeyba ugu sharadeen cinwaano cusub oo ku soo degay Google Play Store.
Ibliis aan dhimaneyn wuxuu rabaa inuu sameeyo dalool weyn qaybta ciyaartooyda mashquulka badan, inkasta oo ay si sax ah u samayn doonto maadaama ay tahay ciyaartoy badan. Gundhigga dambe ee Diablo Immortal wuxuu ka dhici doonaa inta u dhexeysa Diablo 2 iyo Diablo 3.
Y Blizzard ma uusan badbaadin barashada Diablo Immortal, tan iyo markii muuqaalka muuqaalka aad muujisay waxaad si buuxda u arki kartaa ciyaar dhameystirtay iyo inay umuuqato wax ka weyn.
Dhamaan hack 'n waayo aragnimo uurjiifka Diablo hore Waxaa loo keenay shaashadda yar si loo helo ilaa 6 fasal oo kala duwan: Necromancer, Wizard, Demon Hunter, Barbarian iyo Crusader. Blizzard wuxuu kuu balan qaaday khibrad badan oo ciyaartoy badan oo mobilkaaga ah oo uu la leeyahay Diablo Immortal.
MMOARPG (Massive Multiplayer Online Action RPG) oo aan ku gali doonno a adduun joogto ah oo leh heerar fara badan iyo waxaan rajeyneynaa in markan ay awood u yeelan doonaan inay soo saaraan godod si aan kala sooc lahayn, maaddaama mid ka mid ah dhaleeceynta ugu weyn ee Diablo 3 ay ahayd la'aanta ikhtiyaariga ah ee ku celcelinta isla khariidadaha iyo mar kale; wax aad u gaar ah oo ku saabsan labadii hore Diablo.
Sheekadu annaga ayey ina qaadataa dhagaxii aduunyada ee la burburiyey oo goobihiisiina waxay ku kala firdheen meesha quduuska ah. Waxaan isku dayi doonaa sida halyeeyga ah inaan u nadiifino musuqmaasuqa ugana hortagno Herald of Terror Skarn inuu ugu dambeyntii helo dhammaan jajabyada si uu mar labaad ugu yeero Diablo.
U ogolow Fortnite iyo PUBG Mobile inay gariiraan, maxaa yeelaye Blizzard lama joogin gabdhaha yar yar wuxuuna doonayaa inuu la dego Diablo Immortal waqti weyn. Hadda waad isdiiwaangalin kartaa si marka loo helo, waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee rakibaya oo tijaabinaya haddii aan wajahno mid kale oo ka mid ah ciyaartoy badan oo sannadaha soo socda ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Blizzard wuxuu ku dhawaaqay Immortal Diablo, oo ku soo degay taleefannada gacanta mid ka mid ah sagas-yada ugu caansan
Kaaliyaha Google uma imaan doono dadka ku hadla Sonos ilaa 2019